Ii-FAQs-Sichuan Shuer Medical Devices Co, Ltd.
Amaxabiso ethu axhomekeke ekutshintsheni ngokuxhomekeke kubonelelo kunye neminye imiba yemarike.Siza kukuthumelela uluhlu lwamaxabiso oluhlaziyiweyo emva kokuba inkampani yakho iqhagamshelane nathi ngolwazi oluthe kratya.
Nceda uqhagamshelane nathi ngeenkcukachaulwazi
Ubuncinci bobungakanani bomyalelo buxhomekeke kwii-odolo zakho ezahlukeneyo kunye nokupakisha.
Ewe, sihlala sisebenzisa ukupakishwa kokuthumela ngaphandle okukumgangatho ophezulu.Sikwasebenzisa ukupakishwa kwengozi ekhethekileyo kwimpahla enobungozi kunye nabathumeli abaqinisekisiweyo bokugcina okubandayo kwizinto ezinobushushu bobushushu.Ukupakishwa kweengcali kunye neemfuno zokupakisha ezingezizo ezisemgangathweni zingafaka intlawulo eyongezelelweyo.
Iindleko zokuthumela ngenqanawa zixhomekeke kwindlela okhetha ngayo ukufumana iimpahla.I-Express yeyona ndlela ikhawulezayo kodwa ikwabiza kakhulu.Ngolwandle, imithwalo sesona sisombululo silungileyo kwiimali ezinkulu.Ngokuchanekileyo amaxabiso omthwalo sinokukunika kuphela ukuba siyazazi iinkcukacha zesixa, ubunzima kunye nendlela.
Ngaba sinokubonelela ngeenkonzo zokuvelisa i-OEM?
Sinokubonelela ngenkonzo yesampulu eyenziwe kwangaphambili ngaphambi kokuqalisa imveliso yobuninzi.Sikwabonelela ngeenkonzo zesiko kunye ne-OEM kubathengi bethu.
Zeziphi iziqinisekiso esinazo?
Sinenani leengxelo zokuvavanya imveliso yomntu wesithathu kunye neziqinisekiso, kubandakanywa i-SGS, i-CE, i-NIOSH, kunye neziqinisekiso zokuvavanya i-STOS;ngokusebenzisa ISO9001:2016 isiqinisekiso esisemgangathweni, kunye 3 amalungelo awodwa abenzi.
Ungakhe ukhenkethe umzi-mveliso?
Ewe kunjalo, siyabamkela abathengi ukuba bandwendwele umzi-mveliso wethu nangaliphi na ixesha, ukuqonda ukuze sibambisane ixesha elide
Iimveliso ezishushu - Imephu yesiza - AMP Mobile FFP2 Isiphefumlo, Imaski yaseTshayina, Imaski yePPE, Pharmacy Surgical Mask, Imaski yobuso, Imaski ekhuselayo yaseTshayina,